Iziqinisekiso ze-10 ze-Microsoft ezifunekayo namhlanje kwi-2018 | ITS Tech School
Iziqinisekiso zeMicrosoft kwiimfuno namhlanje: Isikhokelo sokusebenza seMicrosoft yeWindows iprogram esetyenziswa ngokubanzi kwihlabathi kunye nePS ezininzi ezininzi eziqhuba i-OS, zenze ukuba i-MS ikhele itoni yezixhobo ezixhasayo kumaseva, ukuqhubela phambili isicelo kunye nesigaba sefu ukulungelelanisa neemfuno zokuphuhlisa.
Ukusuka kumbono wokuzama ukucinga okanye umsebenzi wokukhangela, ngokugqibeleleyo ukugqiba nayiphi na enye yezona zinto zifunyenwe kakhulu kunye nokufunwa kweempawu zikaMicrosoft kwi-2018 ziya kubanika indlela yokumisela yokuqhubela phambili ekubeni zonke zezi zifundo zichongwa kunye ne-OS inhlangano eyidalile. Unokufumana malunga nalezi ziqinisekiso kwaye ufune emva kwezona zinto zilungele ukufumana amathuba angcono.
Iziqinisekiso ze-10 zeMicrosoft kwiimfuneko
1. I-Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Izibonelelo zeseva:
I-MCSE yeZiseko zoNxibelelwano zenzelwe ukuqinisekisa ukuba ingcali inamakhono abalulekileyo okujongana nokugcina isakhelo somnatha wesiseko. Umntu uya kuba nokufunda ngokucophelela komlingani kunye nolawulo lwesakhelo, ubuchule, iinkqubo zolawulo kunye nokugcinwa kwedatha. Xa usebenza ngokugqibeleleyo kwekhosi, unokufumana amacandelo omsebenzi njengengcali yenkxaso okanye njengomphenyi wezokukhuseleko kwedatha. Kuyimbopheleleko ukugqiba iimvavanyo ezi-5 ezikhethekileyo zigcina ingqalelo ekujoliswe kuyo ukufikelela.
2. I-Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): I-App Builder
Ngexesha elithile xa iinkqubo ezinonophelo ziye zavela, ukufumana isatifikethi se-MCSD simele siqinisekiswe ukuba umnini-mhlaba ngumenzi womenzi wesakhono onokwenza iifayili zangoku ziphathekayo. Bayakwazi nokwakha izicelo zewebhu, izixhobo ezisisiseko zobunjineli beminyaka entsha. Iprogram ilindele ukuba ugqibe iphepha kwi-Universal Windows Platform kunye ne-App Builder ukwamukelwa ngaphambi kokufuna emva kwezifundo eziqhutywe phambili.
3. I-Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2016
Uhlobo olutshanje lweprogram olufikelelekayo, isatifikethi se-MCSA senza uchwepheshe ukuba aphendule ngokujongana neWindows Server 2016 kunye neenkqubo ezihambelanayo. Indoda ephothula ngokugqibeleleyo ikhosi iya kuqinisekiswa ukuba ifumene ukufundwa kolawulo lweenkcukacha, ulawulo lwe-server kunye nokugcina. Ukuguqulelwa kwe-2016 kuvuselela abo njengokuba ngoku banokubakhokelwa ngeengcamango zangoku kunye neenkqubo zokuphucula ezenziwe kwiWindows Server. Njengasekupheleni, iMicrosoft inxaxheba kwiikhosi ezahlukeneyo ezinika ukongezwa okongezelelweyo ukuchitha ixesha elibalulekileyo kwiindawo eziqhelekileyo zokubamba. Kwimeko apho unenjongo yokubafihla konke, kubalulekile ukwenza zonke iikhosi ezihambelanayo neWindows kunye nenjongo ethile ekupheleni ukuba ufaneleke njengengcali kwintsimi yakho.
4. I-Microsoft Certified Solutions Solutions: I-Platform yedata
Ngokufezekisa ngokugqibeleleyo isitifiketi se-MCSE kwi-Data Platform, unokukwazi ukuthetha ngamashishini anokukwazi ukujongana ngokufanelekileyo ne-SQL yokulawula iseva nokujongana nokulungiswa kwedatha ye-intanethi eyenziwa ngabanye. Isatifikethi sinye sichazela imibutho ukuba umnini-zimeme angenza ulawulo lweedatha zombini nakwiindawo ngokufanelekileyo. Uluhlu lweemvavanyo ezi-5 ezihlukeneyo kufuneka zigqitywe kwaye ungeze ukongeza ixesha elifanelekileyo kwiindawo eziqhelekileyo zentlogue echongwe ngeSQL Server.
5. IMicrosoft MCSE: I-Platform yamaGu kunye neZiseko
IMicrosoft ineepotifolizo ezinkulu ezijoliswe ekunikeni abantu ithuba lokuba namava athile aphuculweyo. I-Platform yamaGu kunye neZibonelelo ziqinisekisa ukuba unokwenza ngokukhawuleza ukujongana nefu kunye neenkcukacha ezijoliswe yiMicrosoft esebenzisa intuthuko eyahlukileyo. I-MS Azure yimiqathango phakathi kwamalungiselelo amafu aqhelekileyo anikezelwa kubaxumi kwaye ngokufumana isivumelwano, unokwandisa ixabiso lentlangano kwaye ujongane nezinto zawo.
6. Isixhobo seMicrosoft System - Ukulawula uMphathi weeNkqubo zoLawulo lweNkqubo kunye ne-Intune
Xa uvuma ukwamkela uMphathi woLawulo lweComputer Configuration Manager kunye ne-Intune, ikhosi iya kunika ulwazi olunenzuzo kwiindawo ezahlukeneyo zeprogram enkulu kunye neprogram ye-Microsoft Intune. Iquka ulwazi malunga nendlela efanelekileyo yokujongana nemisebenzi yansuku zonke, ulawulo lwenkqubo, ukugcina isitotho zombini izixhobo, inkqubo, ukunyamekela izicelo kunye nokulungelelanisa idatha eveliswe nge-Intune. I-certification nayo ilawula ukuhambisana, ukhuseleko lokugqibela kunye nokuvelisa iingxelo.
7. I-Microsoft Exchange Server: Ukuyila nokuSebenzisa iMicrosoft Exchange Server 2016
Iqoqo elide leenkxaso ezinikezelwa yiMicrosoft libizwa ngokuba libiza ngokunyusa abantu abafuna iindawo ezingabasebenzi. Xa uzalisekisa ngokuqinisekileyo le mfundiso, ukwandisa ixabiso lentlangano yakho ngokuthi ube namandla okucwangcisa i-Microsoft Exchange Server 2016 njengoko kuboniswe yimfuneko ethile kwaye uyithumele. Umfaki sicelo makangabi nako ngaphantsi kweminyaka emithathu yamava asebenza kunye neeseva ze-Exchange kwaye xa begqibe eli, baya kuba namandla okukhokela iqela leentloko kunye nokufunda ezidibeneyo ngamaphepha eemvavanyo ahlukeneyo ayingxenye yale khosi.
8. I-Microsoft Office 365: Ukunika amandla nokuLawula i-Office 365
I-Microsoft Office eyasetyenziselwa ukuba yinkqubo ezimeleyo ibe ngulawulo olusekelwe kubulungu kunye ne-Microsoft Office 365. Iingcali ze-IT ziyakwazi zonke iiprogram ze-Office 365 kuquka nezimo zayo, iimfuno kunye nobuntu. Xa befunda ngokubanzi ekusekeleni phambili kwaye banako ukuphanda ngokupheleleyo iziphumo ezikhoyo zeprogram, bangasebenzisa ngokufanelekileyo i-Powerpoint, Excel, iZwi phakathi kweeprojekthi ezahlukeneyo. Ukongezelela, yinkqubo ebalulekileyo kunye nengqondo engaphantsi kwengqondo eyahlukileyo kunye neyezinye i-SQL iseva kunye nee-Azure ezijoliswe kwi-Cloud-based worksaments onokuzifumana ngokugqiba izinto ezibalulekileyo.
Ngaphambi kokuba uthathe isitifiketi seMicrosoft ye-ASP.Net, kunyanzelekile ukuba ungabikho kweminyaka emihlanu yokubandakanyeka kwinqanaba. Ngethuba elide lokuba udale iiprogram ezisebenzisa i-ASP.Net kwaye mhlawumbi isibini sinamava ixesha elide lokuthabatha i-MVC esekelwe ngamalungiselelo asekelwe, kufuneka ukuba kube nzima ukufumana isitifiketi se-MVC 5. Isibhengezo sinika ulwazi malunga nokuyila, ukuthumela, nokwakha umxhasi wezaklayenti esebenzisa ubunjineli bemveliso. Njengawezinye iinkqubo ezininzi zokuqinisekiswa, kufuneka usebenze ngokukhawuleza ukuqhubela phambili kwamaphepha okuvavanya ngenjongo ethile ekupheleleni ukuba ube ngumcebisi malunga nalo mbandela. Njengoko kufuna ulwazi olubanzi kwiNet, i-ASP.Net kunye ne-MVC 5 ngexesha elifanayo, kucatshangwa ukuba yinkxalabo ephezulu kwaye ilungelelanisa iingcali ezinamava okujolise ekuncedeni umsebenzi wazo.
10. I-Microsoft Certified Solutions Associate: SQL Server 2016
Xa usebenza ngokugqibeleleyo isitifiketi se-MCSA kwi-SQL Server 2016, kuyaqondwa ukuba uya kuba nolwazi olubalulekileyo oluchanekileyo lokujongana nesiseko seSQL phezu kwefu nakwi-indawo njengoko umbutho ulindele. UMicrosoft unomyinge wexesha elifutshane ukuqinisekiswa kwiimodyuli ezahlukeneyo ezibizwa ngokuba ngu-SQL 2016 ukuphuculwa kweenkcukacha, ukuphathwa kwedatha kunye noPhuhliso lweBI. Iingcali ngeSQL isitifiketi zinezinye iindlela zokufumana ubuchule kwintsimi ekhethekileyo kwiindawo ezithile zengqesho kunye nophuhliso lwezakhono okanye zingathatha iimvavanyo ezahlukahlukeneyo xa zisenokujamelana nokungaqiniseki nxu lumene nalo.